Xaflad Hambalyo iyo taageero soo dhaweyn maamulka cusub ee XSKK London loogu qabtay - Kubadda Somali Sport Portal
kubadda.com / Saturday, June 8, 2013
Waxaa kadib lagu soo dhoweyey martidii kulanka Nuradiin Cali Siciid (Badda & Qaranka) oo ka yimi Birmingham, Cabdirashiid Axmed BALASTIKO(Badda & Qaranka)oo ka yimi Georgia, USA. Dr Maxamed Aadan Jeelle oo ahaa garsoore Caalami ah taariikhdana si gaar ah u xusto habeenkii Zaiir iyo Jeenyo ee intii joogtay ama maqashay ogtahay sidii ay Bashiir M. Jaamac Goobe u qabteen garsoorkii ugu farsamada badnaa abid.
Dr Jeelle wuxuu u hambalyayey lana dardaarmay xubnaha xiriirka K.Kolayga. Waxa kadib hadlay Bashiir Yuusuf Maxamed (Fox) ahna G/xigeenka 1aad ee XSKK isla markaana ah macalin naadi iyo xulka Qatar, booqasho gaaban ku tegey Muqdisho si kooban uga warbixiyey sidu xaalku manta yahay iyo waxa loo baahanyahay in la qabto. Waxaa kadib hadal aad u kooban soo jeediyey Cibaado Cabdi Warsame(ENC) oo ka timi dalka Canada, waxaa martida soo af jaray Sahro Warsame oo ka mid ahayd gabhihii ugu horeeyey ciyaarta Tenniska dalkeena isla markaana cayaari jirtay Kubadda Kolayga soona bandhigtay sawiro hore oo soo godliyey xusuuso waayo waayo.
Markii Xaflada la guda galay waxaa ku soo dhoweeyey dadka yimi ugana mahadceliyey Miski Cumar oo ku hadashay dhamaan bahda Kubadda Kolayga Dumar iyo Rag, wexeyna u hambalyaysay xubnaha XSKK wexeyna ugu baaqday wada shaqayn iyo waxqabad muuqda. Waxaa ka dib hadlay Xaawo Taako oo ka mid ah Gudoomiye Ku xigeenada XSKK waxyna soo jeedisay in loo baahan yahay wada shaqaynta bahda K.Kolayga iyo culayska hawsha wax qabadka u baahan. Xaawo oo muddo dheer u soo cayaartay Naadiga Hawlaha Guud ayaa u mahad celisay dadkii soo qaban qaabiyey munaasabadan.
Gebagebadii kulanka macalin Xasan Farah JOHN oo daadihinayay barnaamijka ayaa ku waree jiyay micraphone-ka Maxamed Sheikh Cabdi (Weli) oo ka mid ah xubnaha cusub ee XSKK, oo u mahad celiey intii xaflada soo qabanqaabisay, intii ka soo qayb gashay, iyo martida waqtigoodii ciriiriga ahaa u horay munaasabadan. Maxamed wuxuu tusaaleeyey muhimada wada shaqaynta, Istaageerka iyo midnimada. Waxaana kulanku ku soo geba geboobay Jawi farxad, raynrayn iyo xusuus waayo hore.
Previous Article Somali NOC presidential statement outlines NOC’s roles in nationwide sport
Next Article Kulan ay iskugu yimaadeen dhamaan xubnaha ku jira Xiriirada Isboortiga Soomaaliyeed oo ka dhacay London
4820 Rate this article: